Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pandrindrana ho an'ny mpanoratra Titanic Tommy Andrews | William C Barnes - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ahoana no nahatonga azy: Fahatsiarovana ny fiainan'ny ankizy fahiny ary Fandresena amin'ny fiainana taloha
From: Thomas Andrews, fahatsiarovana ny fiainana teo aloha, nataon'i William Barnes
William Barnes no mpanoratra Thomas Andrews, fahatsiarovana ny lasa. Nanomboka nahatsiaro hafahafa tamin'ny fahatsiarovan-tena i Barnes fony izy mbola zaza. Hoy izy ao amin'ny bokiny:
"Tamin'ny faha-efatra taonako dia nanintona sambo iray misy setroka efatra aho ary nilaza tamin'ny ray aman-dreniko hoe: 'Ity ny samboko, saingy maty izy.' Nanantitrantitra ny reniko niantso ahy hoe 'Tommy' aho ary niresaka momba ny anadahy roa, rahavavy, nenitoana ary dadatoako, izay tsy nisy fantatr'ireo ray aman-dreniko. Nisy ihany koa ny nofy ratsy tsy an-kijanona - sambo goavambe iray somary manakaiky ahy, misy kiakiaka, fifamaliana mafana, rano mangatsiaka manindrona ny vatako, vy be miloko paiso milatsaka amiko-ary, hatrany hatrany, hifoha tomany aho . "
Amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny fiainana an-tany, dia antsoina hoe ny anaran'ny fiainana taloha
“Nifindra tany Washington DC aho tamin'ny faha-25 taonako, izay nangataka fanampiana tamin'ny mpanolotsaina iray izay nampiasa hipnosis ho fialamboly. Nandritra ny fotoam-pivoriana dia henoko ny niadian-kevitra momba ny 'volavolan-tsambo.' Raha vantany vao nivoaka ilay fahitana aho dia nipetraka aho ary nilaza hoe 'Tommy Andrews no anarako.' Sambany nahare ny anarana feno aho.
Tamin'ny taona 38 dia nanambady fanindroany aho, ary niaraka tamin'i Mary Ann, vadiko vaovao, dia nifindra tany Arizona. Fotoam-pialan-tsasatra iray, namoha an'i Mary Ann aho raha nanonofy mafy nandritra ny torimaso aho, niantso ireo anarana tsy fantany, nandritra ny fotoana rehetra nitenenany tamin'ny akondro iray.
Taorian'izay, dia nahatonga ahy ho ketraka lalina ny ranon-dranomasina. Niharatsy ny fiainako sy ny fiainako manokana, nirintona ny fitiavan-tenako, ary nieritreritra ny hamono tena tany an'efitra aho. Taorian'ny nandidiana ahy hikatsaka fanampiana, dia nanomboka fialan-tsasatra ara-batana sy ara-tsaina ary ara-tsaina aho. Tao amin'ny 1997, dia nantsoina ho Dr. Frank Baranowski aho, psikology iray izay nampiasa ny faharetan'ny taonan'ny fahantrana tamin'ny fahombiazany tamin'ny fanampiana ny olona handresy ny phobias. "
Nanoratra momba ny toe-tsainy koa i Barnes tamin'ny nanombohan'ny fotoam-pihemorana niaraka tamin'i Dr. Baranowski. “Tsy hiasa mihitsy io, 'hoy aho nieritreritra, nitsiky tao anaty. 'Izany no eritreritro farany farany.' ”
Na izany aza, ny fitsaboana taloha dia niasa ary ny fivoriana dia nanampy an'i William Barnes handray ny fiainany indray. Ireo seho ireo dia voarakitra an-tsoratra ary misy sombin-tsoratra hita ao anaty boky an-kira antsoina A Tantaram-piainana taloha momba ny Mpamorona, nataon'i William Barnes sy i Frank Baranowski. Ao amin'izany, afaka mandre an'i Barnes miteny i Tommy Andrew ny lozam-pifaneraseran'i Tommy Andrew rehefa mamaritra ny fitsapana Titanic ny ary mamelona ny fahafatesany eo am-bavahadin'ny sambo lehibe.
Reincarnation: Trangam-pahatsiarovana ny tsingerintaona nahaterahana
Ny trangan'i William Burns dia maneho ny fomba amam-piainana izao tontolo izao, na tontolo ara-panahy, ary mametraka ny zava-mitranga eo amin'ny fiaraha-monina izay manome antsika soso-kevitra momba ny fomba fiainantsika taloha, ny tanjona sy ny tanjona. Ohatra, i William Barnes dia teraka tamin'ny volana 14, 1953, daty fankalazana ny fandefasana ny Titanic. Teraka tamin'ny daty i Barnes Titanic sank, 41 taona taorian'ny loza. Tsara homarihina fa ny nomeraon'ny Titanic dia 401, izay maneho ny isan'ny 41. Ankoatra izany, tamin'ny andro nahaterahan'i Barnes, ny sarimihetsika sarimihetsika voalohany Titanic navoaka.
Ahoana no nitrangan'ireny fisehoan-javatra sy simolonista ireny? Momba ny fahaterahan'i Williams Barnes tamin'ny fitsingerenan'ny taona Titanic ny Miala sasatra aho, mino aho fa ny fanahin'ny olona iray na ny ambony kokoa dia afaka manova ny daty nahaterahana, toy ny fahafatesan'ny olona iray ihany no mety hitranga. Ity trangan-javatra ity dia hita taratra amin'ny fahafatesan'i John Adams sy Thomas Jefferson ao amin'ny 50th tsingerintaonan'ny fanambarana ny fahaleovan-tena.
Ankoatra ny famakiana ny bokiny sy ny fihainoana ny horonam-peo, azafady azafady ny tranokalan'i William Barne, izay misy fampahalalana mahaliana momba ny Titanic, toy ny tandrony, ary ny ampahany avy amin'ny fiainany taloha.
William C. Barnes: Mpanoritra Ara-panahy
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endriky ny taolan-tarehy eo amin'i Andrews sy Barnes, na dia mafy kokoa noho i Andrews aza i Barnes.
Ny fiainana talenta sy fahalalana: Ao amin'ny bokiny, i Barnes dia manoritsoritra ny fahalalany ny fahaizana momba ny sambo ampiasaina amin'ny vanim-potoana Titanic, izay tsy nianarany tamin'ny fomba mahazatra.